को हुन् त योगेश भट्टराइ – erupse.com
को हुन् त योगेश भट्टराइ
क. योगेश भट्टराई २०२३ भदौ २१ गते ताप्लेजुङको साँघु (मैवाखोला गाउँपालिका–३) मा आमा महेन्द्रादेवी र बुबा स्व. भीमलालका कान्छा छोराका रूपमा जन्मिनुभयो । मध्यमवर्गीय परिवार थियो । तीन दिदी, एक दाजुु र एक बहिनी । उहाँ दुुई वर्षको छँदा नै बुवा बित्नुुभयो ।
ताप्लेजुङका असल अभिभावक
उतिखेर साँघुमा माध्यमिक र उच्च शिक्षा शिक्षा नभएक कारण योगश संखुवासभाको मादी हँुदै काठमाडौं आउनुभयो । तर, ताप्लेजुङसँगको सामीप्य र ताप्लेजुङका जनताको सम्बन्ध भने सधैं कसिलो रह्यो । देशको आशाको अनुहार त हुँदै हुनुहुन्छ, ताप्लेजुङ र ताप्लेजुङे जनताको असल अभिभावकको भूमिकासमेत उहाँले निरन्तर निर्वाह गरिरहनुभएको छ । ताप्लेजुङको विकास र समृद्धिका लागि काठमाडौंमा हुने अभियानमा मात्रै होइन, सकेसम्म जिल्लामा भएका अभियानमा समेत उहाँ सधैं सक्रिय सहभागी हुनुभयो । ताप्लेजुङको समग्र विकासका निम्ति उहाँहरूकै सक्रियता र अगुवाइमा २०६४ सालमा ‘ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्र’को स्थापना भयो । उहाँ त्यसका संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो, जसले ताप्लेजुङको विकासका लागि केन्द्रीय तहमा उहाँकै नेतृत्वमा बहसहरू सुरु ग¥यो ।
ताप्लेजुङमा आगलागी हँुदा होस् वा पहिरो जाँदा अथवा कुनै प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्दा होस्, उहाँ सधैं ताप्लेजुङे जनताको संकटको साथी बन्नुभयो । विपत्तिमा परेका ताप्लेजुङका जनताको राहत र उद्धारको अगुवाइ उहाँले नै गर्दै आउनुभएको छ । ताप्लेजुङको विकासनिर्माणका लागि राज्यको निर्णायक तह र निकायमा दबाब दिने तथा विभिन्न विकास निर्माणका परियोजनाको अगुवाइ गर्ने काममा उहाँको भूमिका र नेतृत्व सधैं अग्रणी छ ।
त्यति मात्रै होइन, उहाँले संकटमा परेका ताप्लेजुङका जनतालाई विभिन्न किसिमका सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । पढ्न नपाएका गरिबका छोराछोरीलाई स्कुल खोजिदिनेदेखि उपचार नपाएकाहरूलाई अस्पताल पु¥याउनेसम्मको सामाजिक कामलाई समेत उहाँले प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । ताप्लेजुङदेखि काठमाडौंसम्मका ताप्लेजुङवासीले अप्ठ्यारो र समस्या पर्नेबित्तिकै योगेशलाई सम्झने गर्दछन् ।
जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको रहस्यमय हत्याविरुद्धको आन्दोलनमा अगुवाइ उहाँले नै गर्नुभयो । यस्तै, अनेक आन्दोलनबाट खाँरिदै, माझिँदै युवा जोस र उत्साहका साथ अघि बढिरहनुभएका योगेशले खासगरी २०५०÷५१ सालतिर शिथिल भएको नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनलाई नेपाली समाजमा पुनःस्थापित गराउनुभयो ।
योगेशले २०६२÷६३ मा सम्पन्न ऐतिहासिक जनक्रान्तिमा नेकपा (एमाले) को काठमाडौं उपत्यका कमिटीको सचिवका रूपमा आन्दोलनको संयोजन र परिचालनमा कमान्डरको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । उपत्यकामा आन्दोलनको उभार ल्याउनमा उहाँको नेतृत्वदायी भूमिका थियो । आन्दोलनमा उपत्यकाभित्र अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा १२ बुँदे सहमतिपश्चात् तत्कालीन माओवादीलाई समेत समन्वय गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नुभयो । जनक्रान्तिका बेला उहाँका योगदानको प्रशंसा र सम्झनामा लेखिएका हजारौं लेख, रचनाले उहाँको छवि राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत परिचित गरायो ।
राजनीति गर्ने मानिसले आफ्नो देशको भूगोल, इतिहास र संस्कृतिको न्यूनतम ज्ञान राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता बोक्ने योगेशले नेपालका ७२ जिल्लाको भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र ज्ञान पनि उत्तिकै छ । देशभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पनि विशाल सञ्जाल तयार पारिसक्नुभएको छ । भारत, चीन, अमेरिका क्युबा, दक्षिण अफ्रिका, बेल्जियम, पोर्चुगल, जर्मनी, लक्जम्बर्ग, फ्रान्स, बेलायत, जापान, कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, चेक रिपब्लिक, अस्ट्रिया, रुस, ब्राजिल, कतार, साउदी अरब, दुबई, बहराइन, साइप्रसलगायत देशको भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । उहाँले ती देशको भ्रमणबाट त्यहाँको राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्य विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी सकारात्मक पक्षलाई आफ्नो देशको विकास नीतिमा समाहित गराउन पहल गरिरहनुभएको छ । विभिन्न देशका राजनीतिक दल, सरकार तथा अन्य विभिन्न संघसंस्थाले उहाँलाई अतिथिका रूपमा आफ्ना विचार राख्न निरन्तर आमन्त्रण गरिरहन्छन् । उहाँको यो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणले नेपाल र नेपालीलाई विश्वभर चिनाउन तथा नेपाली राजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मनमा राख्न उल्लेख्य सहयोग गरेको छ ।
शान्तिपूर्ण अप्रिल क्रान्तिले लोकतान्त्रिक राजनीतिक क्रान्तिका मुख्य कार्यभार पूरा भएकाले अब आर्थिक क्रान्तिलाई मूल मन्त्र बनाएर राष्ट्रको आर्थिक÷सामाजिक समृद्धिका लागि सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्दछ भन्ने उहाँको दृष्टिकोण रहेको छ । देशबाहिर पोखिएको नेपाली युवाहरूको रगत र पसिनालाई नेपाली माटोमा नै एकाकार गराउनुपर्ने कुरामा उहाँको जोड छ । ‘सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले श्रम गर्दै उत्पादनका काममा लाग्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजी र उद्योगको विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । सबैले अनिवार्य कर तिर्नुपर्छ । अनि मात्र देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ । युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ,’ उहाँको मूलमन्त्र छ ।
बुधबार, साउन १५, २०७६ मा प्रकाशित